Miyay tahay inaad waligaa cusbooneysiiso bog si heer sare ah loo qiimeeyay? Quraafaad SEO | Martech Zone
Khuraafaadka SEO: Miyaad Weligaa Cusbooneysiin Kartaa Bog Aad Loogu Qiimeeyay?
Jimce, Maarso 5, 2021 Jimce, Maarso 5, 2021 Douglas Karr
Saaxiibkeyga ila shaqeeya ayaa ila soo xiriiray oo u fidinaya macmiilkooda goob cusub oo aan weydiistay taladayda. Wuxuu sheegay in La taliyaha SEOt oo la shaqeyneysay shirkadda ayaa kula talisay inay hubiyaan in bogagga ay ku darajeynayeen aan la beddelin haddii kale ay lumin karaan darajadooda.
Tani waa wax aan macno lahayn.
Tobankii sano ee la soo dhaafay waxaan ka caawinayay qaar ka mid ah noocyada adduunka ugu waaweyn inay u haajiraan, dejiyaan, oo ay dhisaan istiraatiijiyado nuxur ah oo isku dhafan darajada dabiiciga ah kanaalka aasaasiga ah ee rajooyinka iyo hoggaamiyeyaasha. Xaalad kasta, waxaan ka caawiyey macmiilka inuu u habeeyo bogagga hadda qiimeynta ku jira iyo waxyaabaha la xiriira siyaabo dhowr ah:
Isku daridda - Dariiqooyinka wax soo saarka maadadooda darteed, macaamiisha inta badan waxay lahaayeen bogag aad u liita oo darajooyinkoodu aad u badnaa isla markaana isku mid ah. Hadday haysteen 12 su’aalood oo muhiim ah; tusaale ahaan, oo ku saabsan mowduuc… waxay qorayaan 12 qoraal oo baloog ah. Qaarkood waxay kuxiran yihiin okay, badankood ma aysan sameyn. Waxaan dib u naqshadeyn lahaa bogga oo aan ku hagaajin lahaa dhammaan su'aalaha muhiimka ah ee ku saabsan maqaal dhammaystiran oo habaysan, waxaan u weeciyaa dhammaan bogagga midka ugu fiican, ka saar kuwii hore, waxaanan daawaday bogga cirka isku shareeraya. Tani maahan wax aan qabtay hal jeer… Waxaan mar walba u sameeyaa macaamiisha. Runtii halkan ayaan ku sameeyaa Martech Zone, Sidoo kale!
Qaabdhismeedka - Waxaan hagaajiyay bogagga bogagga, cinwaannada, ereyada muhiimka ah ee geesinimada leh, iyo astaamaha xoogga leh markasta si aan si fiican ugu abaabulo bogagga khibradda isticmaale ee ka sarreeya. Qaar badan oo ka mid ah la-taliyayaasha SEO ayaa ka baqi doona dib-u-celinta bogga hore ee bog cusub, iyaga oo sheegaya in ay sidaas samaynayso lumiya xoogaa awoodeeda ah markii wax laga beddelay. Mar labaad, tan waxaan ku sameeyay boggeyga si isdaba joog ah markii aan macno samaynayay waana la shaqeeyey mar kasta oo aan si caqli ah u sameeyo.
Content - Waxaan gabi ahaanba dib ugalay cinwaanada iyo waxyaabaha aan ka kooban yahay si aan u bixiyo sharraxaad dheeri ah, oo casriyeysan oo aad ugu mashquulsan martida. Marar dhif ah ayaan yareeyaa eray-tirinta bogga. Marar badan, waxaan ka shaqeeyaa kordhinta tirinta erayga, ku darista qaybo dheeri ah, ku darista naqshadeynta, iyo ku darista fiidiyaha waxyaabaha ku jira. Waxaan tijaabiyaa oo aan wanaajiyaa sharraxaadda meta ee bogagga mar walba si aan isugu dayo oo u kaxeeyo sicirka gujin-ka wanaagsan ee bogagga natiijada mashiinka raadinta.
Ha i rumaysanina?
Dhowr toddobaad ka hor, waxaan wax ka qoray sida loo sameeyo cadee fursadaha SEO si loo hagaajiyo darajaynta raadinta oo aan sheegay in aan gartay maktabadda sida fursad weyn in la wado darajo dheeraad ah. Waxaan kaalinta 9aad ka galay maqaalkayga.
Waxaan sameeyay dib-u-habeyn buuxda oo ku saabsan maqaalka, cusbooneysiinta cinwaanka maqaalka, cinwaanka meta, sharraxaadda maadada, kobcinta maqaalka oo leh talooyin iyo tirakoobyo la cusbooneysiiyay. Waxaan dib u eegis ku sameeyay dhammaan boggaga tartankeyga si aan u hubiyo in boggeygu si wanaagsan u habaysan yahay, oo casriyeysan, oo si wanaagsan loo qoray.
Natiijada? Maqaalka waan ka soo raray darajada 9aad ilaa kaalinta 3aad!
Saameynta tani waxay ahayd aniga labanlaabay aragtida bogga waqtigii hore ee ka yimid taraafikada dabiiciga ah:
Sanado kahor, waa ahaa suurtogalnimada in lagu ciyaaro algorithms waxaadna burburin kartaa darajadaada adoo isbedel ku sameynaya mawduucaaga darajo sababtoo ah algorithms waxay aad ugu tiirsanaayeen astaamaha bogga marka loo eego dabeecadaha isticmaalaha.
Google wuxuu sii wadaa inuu xukumo raadinta maxaa yeelay labadaba si taxadar leh ayey u tollaan. Had iyo jeer waxaan dadka u sheegaa in bogag loo calaamadeyn doono waxa ku jira, laakiin loo kala saarayo iyadoo loo eegayo caannimadiisa. Markaad labadaba sameyso, waxaad cirka isku shareertay darajadaada.
U oggolaanshaha naqshadaha, qaabdhismeedka, ama waxyaabaha laftiisu fadhiistaan ​​ayaa ah dariiqa lagu kalsoonaan karo ee lagu lumiyo darajadaada maaddaama baraha tartamaya ay soo saaraan waayo-aragnimo isticmaale oo wanaagsan oo leh waxyaabo badan oo soo jiidasho leh. Algorithms waxay had iyo jeer u dhaqaaqi doontaa jihada isticmaaleyaashaada iyo boggaaga caan.
Taasi waxay ka dhigan tahay inaad sii wado inaad ka shaqeyso nuxurka iyo qaabeynta naqshadeynta! Sida qof loo kireystay inuu ka caawiyo macaamiisha hagaajinta mashiinka raadinta marwalba, marwalba waxaan diirada saaraa tayada nuxurka iyo khibrada isticmaale ee algorithms-ka.
Dabcan, waxaan rabaa in aan rooga rooga u rogo matoorada baadi goob iyo bog SEO ah hababka ugu fiican… laakiin waan maalgashan doonaa hagaajinta khibrada isticmaalaha marwalba oo leh in kabadan bogaga oo aan laga badalin cabsi darteed ama luminta darajada.
Ma habboon tahay inaad cusbooneysiiso bog si heer sare ah loogu qiimeeyay natiijooyinka mashiinka raadinta?
Haddii aad tahay la-taliye SEO ah oo kula taliya macaamiishaada inaysan waligood cusbooneysiinin waxyaabaha ay aadka u kala sarreeyaan… Waxaan aaminsanahay inaad dayacan tahay waajibaadkaaga si aad uga caawiso inay wadaan natiijooyinka ganacsiga ee la hagaajiyay. Shirkad kastaa waa inay ka dhigtaa waxyaabaha ay ka kooban tahay boggeedu mid casriyeysan, oo ku habboon, ku qasbaya, isla markaana bixiya khibrad isticmaale oo hagaagsan.
Mawduucyo aad u wanaagsan oo lagu daray khibrad isticmaale sare ayaan kaa caawin doonin oo keliya darajo fiican, sidoo kale wad beddelaad badan. Tani waa hadafka ugu dambeeya ee suuqgeynta waxyaabaha iyo istaraatiijiyadaha SEO… oo aan la isku deyin in lagu naaxiyo algorithms-ka.
Tags: kobcinta waxyaabahaku habboonaynta waxyaabahaliiska ku jiraayna search engineSEOquraafaad seocusbooneysiinta waxyaabaha
Xaqiijinta Liiska Ciwaanka iimaylka badan, Xaqiijinta, iyo Nadiifinta
DanAds: Teknolojiyada Xayeysiinta Is-Adeegga ee Daabacayaasha